Ukukhungwa Kwabantu Ngezigaba Ezahlukene – The Ulwazi Programme
Ukukhungwa Kwabantu Ngezigaba Ezahlukene
Ukukhungwa kuhlukahlukene ngezigaba kodwa kusuke kusasho into eyodwa kanti kusalisiko okuthi uma lingagcinwanga likhaleleke. Nabantu abakhungwayo nabo bahlukahlukene ngezigaba zabo. Kweminye imindeni lelisiko alikhaleleki kanti futhi alisetshenziswa, abanye balithatha njengomkhuba nje omuhle.
Ingane yokuqala kumbe inkosana noma inkosazane yakulowomuzi kuye kudingeke ukuthi iye komalume wayo iye kokhungwa ukuze ekukhuleni kwayo ingabi nezinkinga ezingase zidale ukuthi ingaphumeleli. Lokhu kwenziwa kuphela ilowomndeni okholelwa kuko. Kanti kuyenzeka futhi emndenini kube khona ophumayo aye kothwasa, uma esekwethwaseni akabe esabakhulumisa abomndeni wakhe uma bengaqalanga ngokumkhunga ngemali emhlophe. Uma bekwenzile ube esevumeleka ukuthi akhulume nabo.
Kanti ezindaweni zasemakhaya omakoti abaseyizingoduso abavumelekile ukuthi bakhulumise obabezala kanye namanye amalungu omndeni walapho bendele khona, kuye kudingeke ukuthi lawomalungu abakhunge ngemali anduba bakhulume nabo. Uma kuyolotsholwa emzini othile umkhwenyana ufike akhungwe kulowomuzi, kodwa ke yena ukhungwa ngembuzi, leyombuzi esuke iyindlakudla bese kufuthwa inyongo yayo ayichome kuyena ngesipeletu.
Ingane uma iyokhungwa kujwayeleke ukuthi ikhungwe komalume wayo lapho kusuke kuzalwa khona unina wayo. Lokhu kwenziwa ngembuzi esuke ithathwe esibayeni noma ethengiwe uma bengabantu abangafuyile. Lembuzi umntwana uyiswa emsamo kushiswe impepho kubikwe ukuthi lembuzi esemsamo eyokukhunga umntwana wendodakazi eyashadela kasibanibani, bese kuyacelwa edlozini ukuthi lomntwana akakhule kahle angaphazanyiswa ilutho zonke izinto zakhe ziphumelele. Uma seyishisiwe impepho iyahlatshwa imbuzi iphekwe kodwa ayiphekwa yonke, kusikwa umlenze abazohamba nawo sebebuyela ekhaya abazofike bawupheke khona kanti ingane ibe seyifaka isiphandla ilengise nenyongo yembuzi emqaleni, leyonyongo eyofike ibekwe emsamo kubo kwayo ize iphelele khona. Kuyenzeka umntwana akhule aze ashade engazange akhungwe kuye kukhaleleke futhi kubonakale ngoba izinto zingasahambi kahle emzini kuye kudingeke abuye azogcinelwa lolosiko ngoba lusuke ludingeka.
By: Zanele Shange
Categories Culture Tags Ekhaya, Home, Traditional customs
2 thoughts on “Ukukhungwa Kwabantu Ngezigaba Ezahlukene”
Mayelana nokukhungwa kwengane ko malume ezalwa inkosazane yakhona, iyakwaz yini ukukhungwa ngezinkukhu? Kanti akumele ifake isiphandla ekugcineni yini?
Ulwazi Content Manager
27/02/2017 at 7:06 am
Siyabonga ngalombuzo, Zamazulu. Sizocela umphakathi we-Ulwazi Programme uzame ukukuphendula.